Ka fikir gudaha sanduuqa oo ay ku jiraan Suugaanta Suuqa ee 'Entrata' Martech Zone
Dadka Mareykanku waxay sii kordhayaan xulashada guryaha kirada ah maadaama tirada lamaanayaasha is qaba ee carruurta leh ay aad hoos ugu dhacayso isla markaana Millenials ay doorteen inay noqdaan kireystayaal dhaqdhaqaaq, raaxo, iyo sababo dhaqaale awgood.
Iyada oo kor u kac ku yimid millennials-ka ay ku qanacsan yihiin suuqa kirada, layaab malahan in daraasadihii ugu dambeeyay ay ogaadeen taas 74 boqolkiiba guryaha kireystayaasha mustaqbalka waxay u galayaan internetka iyagoo adeegsanaya aaladaha mobilada gurigooda. Ku dhajinta boggaga liistada internetka, ka-habeynta websaydhka mobilada, warbaahinta bulshada, iyo maaraynta sumcadda ayaa ugu sarreeya maskaxda maamulayaasha guryaha. Si kastaba ha noqotee, muuqaalka qiimaha abid ee isbeddelaya ee guryaha, qulqulka fariimaha deganayaasha ee warbaahinta bulshada iyo goobaha dib u eegista, iyo goobo badan oo liistada internetka ah ayaa ka dhigtay shaqo aan macquul aheyn in maareeyayaashu ay sii wadaan.
Suugaanta Suuqa ee Entrata
Suugaanta Suuqa ee Entrata waa xal dhammaystiran, daruur ku saleysan suuqgeynta oo ka caawineysa warshadaha dabaqyada inay la wareegaan qiimeyntooda, sumcaddooda, iyo dhajinta dhammaantood iyagoo wadista taraafikada ku badan boggooda guryaha.
Ka Fakirida Sanduuqa Gudihiisa
Maamulayaasha guryaha waxay ka heli karaan dhammaan astaamaha iyo adeegyada ay u baahan yihiin si ay ugu suuq geeyaan hantidooda inta u dhexeysa barxadda Entrata. Mar dambe uma baahna inay hal abuur yeeshaan ama Ka fikir sanduuqa banaanka baahidooda suuq-geynta maxaa yeelay barnaamijkeennu dhammaantood iyaga ayuu u qabtaa. Waa kuwan waxyaabaha la bixinayo:
Xariirka Fursada ⓡ - Shabakadaha sameeya qaadista culus
ProspectPortalⓡ waa xal dhammaystiran oo jawaabi ah oo u oggolaanaya bulshada dabaqyada ah inay ku muujiyaan liisaskooda la heli karo ee kirada ah waqtiga dhabta ah ee degelladooda. CMS-gu wuxuu u oggolaanayaa guriga inuu isku beddelo sawirro, soo geliyo ereyada muhiimka ah ee SEO, ku dar waxyaabo cusub oo u beddelo naqshad websaydh cusub oo leh dhawr guji oo ku yaal dashboard-ka 'Entrata'. Intaas waxaa sii dheer, boggagayagu waxay ku daraan aaladaha jiilka hogaaminta (isdhexgalka kaarka martida, qiimeynta iyo dib u eegista, ikhtiyaarrada kireynta qadka tooska ah, iyo sheekeysiga tooska ah) si looga caawiyo u rogista taraafikada websaydhada hogaamin dhab ah
Waxaan cabbiri karnaa guusha nooc kasta oo ka mid ah ololeyaasha suuq-geynta ee aan wadno, ha ahaato habeynta mashiinka wax lagu raadiyo, midkiiba hal guji ama xitaa kaarka ololaha boostada. Laga soo bilaabo taraafikada webka, tirada kaararka martida iyo sicirka beddelashada, madashu waxay noo sheegaysaa wax kasta oo aan u baahan nahay inaan ogaano. Meghan Hill, Guardian Real Estate, 150 guri oo isticmaalaya Bogga Prospect
Xariirka ILS- Badbaadinta Waqtiga, Yaraynta Galitaanka Xogta
Qeybta 'ILS Portal' ee qaybta 'Entrata dashboard' waxay maamushaa dhammaan suuqgeynta internetka ee guryaha iyadoo si toos ah loogu quudiyo dhammaan adeegyada liistada internetka. Isla markiiba waxay ka saareysaa unugyada la kireystay waxayna cusbooneysiineysaa dhammaan boggaga wixii isbeddel ah ee lagu sameeyay qiimaha iyo xaaladaha kale ee unugyada.
Waxaan ugu guuleysanay inaan helno dhamaan qoraaladayada kujira liiska 'Craigslist' oo aan kusii nagaano natiijooyinka raadinta. Si toos ah loogu diro Craigslist qalab la'aan waxay ahayd mid dhib badan oo waqti badan qaadata, sidaa darteed way ku adkaatay maareeyayaasha guryahayagu inay dhajiyaan inta badan ee aan weydiisanno. Hadda, waxaan ka helaynaa taraafikada kororka dhammaan guryaha Craigslist sababtaas awgeed. Amber Ammons, Agaasimaha Suuqgeynta iyo Tababarka, Shirkadda Hantida Hore
Qiimaha EntrataPrice - Qiimo Sax ah, Unug Sax ah, Waqti Sax ah
Qeybta Qiimaha Entrata ee dusha sare ee Entrata waxay kormeertaa dhammaan nolosha kirada iyo muuqaalka tartanka si loo saadaaliyo qiimeynta ugu saxsan ee dulqaadka qiimayaasha ee bulshada guryaha ku nool. Maamulayaasha guryuhu waxay ku eegi karaan xogta qiimeynta isdhexgal dareen leh garaafyo si fudud loo akhriyi karo iyo jaantusyo ah marka la jaleeco fahamka sababta iyo sida siciradu u socdaan.
SumcadAdvisorGo'aaminta waxa ay dadka deegaanku doonayaan
Magacaabista wuxuu ku soo ururiyaa dib u eegista guryaha ee shabakadaha oo dhan hal interface oo ku yaal dashboardka 'Entrata' kaas oo sidoo kale ay ku jiraan warbaahinta bulshada oo dhameystiran iyo dib u eegista nidaamka maareynta waxyaabaha. Nidaamka warbixintu wuxuu ka caawiyaa guriga cabirka waxqabadka waqti ka dib, isagoo iftiiminaya guryaha xoogooda iyo daciifnimadooda
Entrata wuxuu dhowaan soo ururiyey xog ku saabsan aragtida iyo qiimeynta dib u eegista iyo baraha bulshada in ka badan 2,000 oo dadka deggan guryaha deggan.
Halkan guji si aad u aqriso daraasadda oo dhameystiran
Adeegyada SEO - Aragtida oo Kordhaysa, Kordhinta Gaadiidka
Waxaan u soo bandhignaa macaamiisheenna labadaba xeeladaha SEO-ga bogga iyo bogga si loo kordhiyo muuqaalka iyo taraafikada degelladooda. Intaa waxaa sii dheer, kooxdayadu waxay bixisaa istiraatiijiyad maareyn sumcad oo kala duwan oo internetka ah oo ay ku jiraan wax walba oo ka imanaya abuuritaanka asalka asalka ah kuna xiraya bogga guryaha bogagga warbaahinta sumcadda leh.
Hoggaamiyaha - Ma Jirto Lug Bidix Ka Dambeysa
LeadManager waxay isku koobaysaa dhammaan taraafikada kaararka martida hantida dashboard-ka Entrata. Waxay uruurisaa oo abaabushaa dhammaan ilaha guryaha hoggaan ha noqoto socod-socod, wicitaanno taleefan, ama weydiimaha khadka tooska ah si loo helo dabagal fudud iyo dabagalka waraaqaha la soco. Iyada oo dhammaan taraafikada hoggaanka iyo warbixinta lagu soo qabtay hal meel, guryaha ayaa awood u leh inay la xiriiraan tilmaamo badan, isbarbar dhiga natiijooyinka, iyo go'aanno caqli gal ah oo ku saabsan halka lagu kharash gareeyo suuqgeynta doollarka.
Tags: kireystayaasha guryahaentrataqolalka suuq geynta entrataaan caadi ahaynhoggaamiyemaaraynta hantidasuuqgeynta maareynta hantidaportal rajomustaqbalhantida maguurtadaiibinta kireyntaIjaara xeeladaha seokireystayaashasumcadvisor